Chii chinonzi IBM? Iyo iceberg pasi pekuchinja muCentOS | Linux Vakapindwa muropa
Nezuro, mumwe wangu David Naranjo akavaudza nhau dzekuti CentOS kuvandudza kwakamiswa. David aive nehungwaru kunongedzera iye anoita sarudzo pakarepo, Red Hat. Zvino, kana iwe ukanditendera, ndichaedza kubvisa imwezve dura kubva paeiii. Ndine urombo ndakatora mukana wechibvumirano cheBlack Friday uye ikozvino ndinofanira kuzvishandisa.
1 Unogona kuchengeta yako (tsvuku) ngowani pa (*)
2 Chii chinonzi IBM?
Unogona kuchengeta yako (tsvuku) ngowani pa (*)
Ndinokukumbira kuti uteerere ndima dzinotevera. Yokutanga ndiyo Kuburitswa kweprojekiti yeCentOS.
Iyo ramangwana reCentOS Project ndeyeCentOS Stream, uye yegore rinotevera Tichachinja tarisiro kubva kuCentOS Linux, kuvakazve Red Hat Enterprise Linux (RHEL), kuCentOS Stream, iyo inogara pamberi peshanduro yazvino yeRHEL.
Kana iwe uri kushandisa CentOS Linux 8 munzvimbo yekugadzira uye unonetsekana kuti CentOS Stream inogona kusangana nezvinodiwa, Tinokurudzira kuti ubate Red Hat nezvesarudzo.
Izvo zvinotevera zvinobva Red Hat chirevo:
MunaGunyana 2019, isu takazivisa CentOS Stream, yekumusoro yekukwiridzira chikuva chakagadzirirwa nhengo dzenharaunda yeCentOS, Red Hat vadyidzani, vagadziri vezvisikwa, uye mamwe akawanda mapoka kuti akurumidze uye nyore kuona zviri zvinotevera paWebhu. Hat Enterprise Linux (RHEL) uye kubatsira kuumba chigadzirwa. Kubva pakuvambwa kwayo, takaona kushingairira kukuru kubva kune vatinoshanda navo uye vanobatsirana padhuze neCentOS Stream uye nekuenderera kuri kuyerera kwehunyanzvi hunopihwa neiyo purojekiti. Saka, Isu takazivisa iyo CentOS Project Board yeVatungamiriri kuti tiri kunyatso shandura mari yedu kubva kuCentOS Linux kuenda kuCentOS Stream.
Kubva kuCentOS webhusaiti webhusaiti
Kubva munaKurume 2004, CentOS Linux iri kugovera inotsigirwa nenharaunda, yakatorwa kubva kunowanikwa pachena kune veruzhinji neRed Hat.
CentOS Board of Directors inoumbwa nenhengo dzeCentOS Project, mazhinji acho anga aripo kubvira kutanga kwePurojekiti, pamwe nenhengo nyowani dzeRed Hat dzakabatsira mukuumba hukama hutsva uhu.
Mune mamwe mazwi, David aive akanganisa. Red Hat haina kurega CentOS Linux, budiriro ingadai yakaenderera mberi sezvo iri nharaunda yakazvimirira. Akangoita chikumbiro chekuti nhengo dzedare rinotungamira (kusanganisira Red Hat vashandi) vaisakwanisa kuramba.
(*) Kana iwe usina kunzwisisa chirevo chezita, ndokusaka.
Chii chinonzi IBM?
Ngatijekesei chimwe chinhu. Ini handisi kushoropodza Red Hat. Zvaive zvisingadzivisike kuti semakambani akatora chinzvimbo chakakura mukuvandudza kweLinux, zvakakosha zvaizochinja. Kunyanya nekuuya kwemafemu asingauye kubva kune nyika yakavhurika sosi. Zvakaitika Oracle paakatenga Zuva uye zvinoramba zvichiitika izvozvi IBM inodzora mutambi wepasi rose weLinux.
Haisi mhosva yemakambani kana nhengo dzeakavhurika sosi yeprojekti nharaunda dzakatenda kuti mupiro wemari nevasimudziri kwaive kwekuda kwechikonzero.
Red Hat IBM, uye IBM yakazivisa shanduko kune yayo yepakati bhizinesi kuenda kumberi. Ginni Rometty, CEO uye aimbova CEO, akadaroe gore komputa, yakawedzerwa nehungwaru hwekunyepedzera, "ikozvino IBM ndiyo yekupedzisira chikuva."
Kune rimwe divi, iyo femu yakaburitsa izvo zvetsika tekinoroji masevhisi anozoendeswa kune yakazvimiririra, pachena inotengeswa kambani. Izvo ndezve kuve diki asi yakanangana kambani.
Ngatidzokerei kuRed Hat chirevo:
Nyika yetekinoroji yatinotarisana nayo nhasi haina kupusa sezvayakaita gore rapfuura, ndoda iyo yemakore mashanu apfuura. Kubva pamashandisirwo emidziyo uye neyegore-echinyakare masevhisi kukurumidza Hardware hunyanzvi uye kuchinja kubva kune ecosystems kuenda kune software sevhisi (SaaS), iyo inoshanda sisitimu inogona kuomeswa kupindura kunyangwe chimwe chezvinodikanwa izvi, kunyanya pachikero uye nenzira yakaoma.
Chimwe chinhu chandinoda kunongedzera kwauri. Mukushambadzira kwako Red Hat inotaura nezve izvo zvinodiwa neIntel uye Facebook. Ivo vaisambove ivo vekutanga vanogashira CentOS kuedza. CentOS Linux kwaive kugovera uko mabhizinesi madiki, vanozvimiririra vanogadzira, uye vanopa webhu vanopa vanoshandisa kudzivirira kunzvenga kubhadhara marezinesi anodhura.
Kubva pane zvakataurwa paCentOS blog, vanoita kunge vasina kufara zvakanyanya.
Tichaona zvichaitika nemamwe mapurojekiti uko Red Hat ine yakananga kana isina kunangana senge Fedora, Wayland kana GNOME.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Chii chinonzi IBM? Iyo iceberg iri pasi pekuchinja muCentOS
Chinhu ndechekuti, CloudLinux inguva yemberi uye makore akareruka pamberi pavo.
Abraham Gomez akadaro
Uye Suse-Novell inobhadharwawo?
Pindura kuna Abraham Gómez
Hongu, yanga isiri Novell kwemakore.
nguva dzose IBM ichikanganisa zvinhu. sezvose zvinobata ...
asi zvakanaka rombo rakanaka Gregory Kurtzer akabuda kuzotaura uye akati ivo vanoita iyo Fork yeCentos8 uye vari kuzoshanda pa "Rocky Linux" inova ichave yaive CentOS yaive kusvika izvozvi.